Booliska iyo Sirdoonka Mombaza oo heegan ku jira xili laga cabsi qabo weeraro ay shabaab geystaan – Radio Daljir
Agoosto 23, 2013 3:54 b 0
Mombaza, August 23, 2013 – Ciidamada ammaanka iyo kuwa sirdoonka ee magaalada Mombaza ee dalka Kenya ayaa heegan la geliyey, kadib xogo qarsoon oo ay heleen saraakiisha dowladda ee gobolka xeebta ee Kenya.
Masuuliyiin ka tirsan ciidanka gobolka xeebta ayaa sheegay in ururka Al-shabaab ay maleegayaan weeraro qaraxyo oo ka dhaca gobolka, arrintaas ayaa sabab looga dhigay sanad kadib markii la dilay sheikh Cabuud Rogo oo lagu dilay Mombaza.
Taliyaha ciidanka amaanka ee gobolka Cost ee dalka Kenya, wuxuu sheegay in ururku ay beegsan doonaan meelaha muhiimka ah ee magaalada Mombaza, ayna xogtaasn hayaan, arrintaas iyadoo laga hortegayo ay talisku heegan geliyeen ciidamada amniga iyo hay?adaha Sirdoonka ee dalka.
Docda kale gudoomiyaha degmada Gaarisa Haruun Rashiid wuxuu sheegay in gobolka woqooyi Bari ay ka dheceen weeraro ay geysteen Al-shabaab, Mudane Haaruun wuxuu xusay in khasaare lagu gaarsiiyey malayshiyada shabaab dagaal ka dhacay xuduuda maalmihii tegey.
Qaramada Midoobey ayaa horey u sheegtay in ay khatarta Al-shabaab ay ku sii fidayso gobolka Barriga Afrika, UN Monitoring Group war-bixin ay soo saareen waxay ku sheegeen in Kenya ay tahay meelaha ay ururku haatan joogaan ee xididdada ku yeesheen.